MyPaint: app yekudhirowa inosimudzira kugadzirwa | Kubva kuLinux
MyPaint: app yekudhirowa inosimudzira kugadzirwa
Isaac | | Applications, Chigadzirwa
Kune akawanda anodhirowa ekushandisa eGNU / Linux, mazhinji acho anozivikanwa. Zvakare, kana iwe uchitsvaga chinotsiva chakafanana neMS Paint, iwe zvakare uchawana mamwe mapurogiramu anogona kukugutsa iwe. Asi na MyPaint Iwe zvakare uchave neplatifomu yekukweva iyo ichavandudza kugadzirwa kuitira kuti iwe ugone kutarisa pane izvo zvinonyanya kukufadza iwe, pasina zvinokanganisa.
MyPaint ndeye mahara, uye yakavhurwa sosi. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezvake maari webhusaiti yepamutemol, kana kurodha pasi kubva muchikamu chayo chekuburitsa. Kunze kwekusununguka uye kuva nenhamba yakawanda yezvinhu, iwe une imwe mukana wakanaka neiri purogiramu. Uye iri mune iyo kesi iyo iwe yaunoshandisa graphic mapiritsi kune ako magadzirirwo. Semuenzaniso, seyakakurumbira Wacom. Chinhu chinoshanda kwazvo kana iwe uri muartist kana iwe uchingoda kudhirowa sechido chekuvaraidza.
Rangarira kuti munguva yakapfuura ndakakuudzawo nezve iyo Quirinux distro, zvakare inoitirwa ino chikamu ... Iyo hombe dhizaini dhizaini yakatotanga-kuiswa mukati mayo pasina kuisa mapakeji anodikanwa rimwe nerimwe.
MyPaint yakagadziridzwa kunyanya ne Martin Renold, uye iye amene anosimbisa kuti iri «inokurumidza uye yakapusa pendi app yevaartist«. Zvishandiso zvaro zvinogona kushandiswa zviri nyore, pasina zvinokanganisa uye nezvose zvaunoda kuti utange kugadzira ako masiketi kana ekugadzira dhizaini. Iwe unowana kubva kumaturusi ekupenda senge akasiyana mabrashi modes, kune vamwe kusanganisa materu, uye kunyangwe mamwe ekuvandudza iwo mufananidzo, nezvimwe.
Unogona kuiwana mu beta kana yakagadzika vhezheni yeMyPaint, zvinoenderana nekuti iwe unoda kuyedza yazvino kana kunakidzwa kugadzikana. Kubva ipapo kumwe kufambira mberi kwakaitwa mu kukura, asi kune zvimwe zvakawanda zvichauya mune ramangwana. Uye zvakare, iye musiki akafunga nezve akasiyana GNU / Linux distros anowanikwa, uye inowanikwa muAppImage universal mapakeji kuti zviite nyore kuisa pane chero distro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chigadzirwa » MyPaint: app yekudhirowa inosimudzira kugadzirwa
Samsung inofungidzira kuisa yayo exFAT mutyairi muLinux uye kana zvakadaro, yaizosvika muKernel 5.6
OneDev, yekudyidzana inosimudzira uye manejimendi chikuva